Yurub Roulette |
Haddii aad raadinayso kulanka roulette toos ah la muuqaalada weli macquul fudud iyo muuqaallo kale, Yurub Roulette waa mid adiga kuu wanaagsan. In this Free Bonus Roulette Site, aad tirooyin ka ciyaari kara 1 in 36 iyo hal eber ah. tirada waxaa kala sooc lahayn xusaa baro casaan iyo madow beddelka on wheel roulette ah. The sawiro 3D ee kulankaan wuxuu bixiyaa khibrad dhab ah oo leh muuqaal dhow-up ee aan giraangirta a. Sidaas si cad waxaad ka arki kartaa kubad uu diidanaa iyo meeshay u matalo. Waxaa jira option sharadka waddo orod ah in kala duwanaansho aad u this. Xadka sharadka ee ciyaarta this bilaabaysaa ugu yaraan £ 0.20 ugu badnaan £ 100 halkii boos.
About sameeysa ee Yurub Roulette
Tani waxay si xirfad leh loo qaabeeyay Free Bonus Roulette Site kulanka waxaa la abuuray by NetEnt. Mid ka mid ah horumarinta ee dunida ugu weyn boqolaal kulan ka qaybaha casino kala duwan sida boosaska, miiska iyo kulan dealer live.
In fudud this Free Bonus Roulette Site ciyaarta, waxaad codsan kartaa khamaar aad on tirada kala duwan oo ay ka mid yihiin khamaar ah ka baxsan. booska halkaas oo aad ku guuleysan karto abaalmarin ugu sareeya Toosan keli ah 35 times of wadarta lacagta sharadka. Waxaa jira afar khamaar ah gudaha kala duwan oo dheeraad ah in aad ku guuleysan karto ka. Kala ka kooban yahay laba tiro oo kala duwan oo bixiya 17 in mid ka mid ah markii kubadaha dhul on mid ka mid ah laba kuwa. Sidoo kale, waddada ayaa saddex lambar ee column ah la mushaar ah 11 in mid ka mid. Corner ka kooban afar lambar oo bixisa 8 in mid ka mid. Ugu dambeyntii, line in uu leeyahay lix tirada bixiya 5 in mid ka mid ah oo ku saabsan wadarta bet.
Makusoo ka baxsan: Waxaa jira shan nooc oo kala duwan oo khamaar ah ka baxsan in aad ku guuleysan karto ka. The-madow cas, sare hooseeyo, kisi-xitaa, column iyo darsin yihiin jagooyinka. lamoodaa halkan waa 1 in 1 marka laga reebo column iyo darsin la 2 in 1. itimaalka ee sharadka waa soo jiidasho leh ka badan yahay khamaar ah gudaha iyo halkan aad ku hayaa in hab a guusha.
Natiijooyinka Game: Tani Free Bonus Roulette Site ciyaarta ayaa muujinaya natiijooyinka toban kulan ee ugu danbeysay ee shaashadda ugu weyn. Waxa kale oo jira waa tab taariikhda in aad muujinaysaa natiijada la soo dhaafay a 100 kulan. stats waxay kaa caawin in aad la istiraatiijiyad wax ku ool ah u ciyaaro kulan mustaqbalka.
Iyada oo sawiro 3D maanka-qarxiyaan iyo muuqaalada xiiso leh si ay uga caawiyaan in aad ku guuleysato si fudud, this Free Bonus Roulette Site ciyaarta ayaa ku laayeen hooseeya guriga of 2.7%.